Ambalavao Olona 50 no efa voasolokin’ilay pastera sandoka
Betsaka ireo tsy an'asa eto amintsika. Mitombo isa hatrany izany indrindra fa ny tanora antony mahatonga ireo tsy mataho-tody hanararaotra azy ireny.
Ho an'ny distrikan'Ambalavao ohatra dia ankizy miisa 50 no efa voasolokina lehilahy iray izay mitonona ho pastera amin'ireny fiangonana zandriny ireny. Milaza fa mahita asa izy ary hakany vola ireo ankizy. Eny am-piandohana dia lazainy fa hanamboarana ireo antontan-taratasy maro isan-karazany ny vola omena azy hahafahana mamonjy ilay asa any ivelany hampanantenainy izay tsy voafaritra. Rehefa vita izany dia hakany vola indray ny ankizy hatao saran-dalana Ambalavao Antananarivo mandroso sy miverina hanamboarany ilay passport ono. Mangina tanteraka izy aorian'izany ka rehefa hanontaniana dia andraso andraso lava ny valiny. Ny nahavariana ireo ankizy any an-toerana dia tsy azo an-telefaonina intsony Ingahirainy ary fantatra fa efa nifindra toeran-kafa. Karohina fatratra ny lehilahy amin'izao. Ny mahavariana amin'ny tranga tahaka itony dia mbola misy hatrany ireo olona voafitaka mikasika ny fahafahana mahazo asa any ivelany. Amin'ny ankapobeny mantsy dia tokony misy agence izy ireny fa tsy izay rehetra mahay miresaka dia hametrahana fitokisana avy hatrany. Anatra ho an'ireo mbola tsy tratra ity tranga ity.
Legende : Ity ilay lehilahy mitonona ho pastera
Fiainam-pirenena Mampiahiahy ny fahanginan’ny Praiminisitra
Mangingina tsy re feo firy indray ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta Ntsay Christian. Tsy dia hita tabilao firy, ary efa matetika io.
Gazety boky Demokrasia laharana faha 13 “Nihemotra ny demokrasia eto Madagasikara”
Nivoaka omaly ny gazety boky Demokrasia laharana faha 13 izay famoakan’ny filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy tany tan-dalana na HCDDED isan-telo volana.
HCDDED “Zavatra tsy ampoizina no maharava fitondrana”
Isany voaresaka ato amin’ny laharana faha 13 amin’ny gazety boky Demokrasia izay navoakanay, hoy ny filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalana na HCDDED tetsy amin’ny biraon’izy ireo
Fikambanana Tambohobe “Aoka samy hitandrina fa mandady ny trambo”
Mampahatsiahy ny 20 taona dia ny 2002 izay fotoana nampamaivay ny raharaham-pirenena teto amin’ny tany sy ny fanjakana ankehitriny, hoy ny filoha mpanorina ny fikambanana Tambohobe,
Fitondrana tsy misy hatokona Mety aminy kokoa ny manaja tena
Herintaona sy tapany sisa hananan’ny Fitondrana Rajoelina hanatanterahany ny veliranony, hanentsenana ny lavaky ny tsy fahaiza-mitantana. Ho sarotra izany, raha tarafina amin’ny fomba fiasa hatramin’izay.